Ginestre Mare 7 - Seashore Apartment - I-Airbnb
Trieste, Friuli-Venezia Giulia, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Trieste
Uma umuntu engena ethempelini lawo wonke amaphupho, kukhona ulwandle...
Ifulethi lethu i-Le Ginestre 7 ingelinye lala maphupho, liqhele ngamamitha amabili ukusuka ngasolwandle. Ingemuva elinikezwa yileli fulethi liyindawo yangasese yasebhishi enalo lonke uhlobo lwezinsizakalo zezingane kanye nabantu abadala. Indawo ekahle yokuchitha iholide elijabulisayo nelingenazinkathazo nomndeni, kodwa iyindawo emnandi yokubaleka kwezothando ngasikhathi sinye! Vumela amagagasi akuqondise!
Indawo yangasese, lapho iminyango yazo zonke izindawo ikhona, inikeza ukufinyelela efulethini. Uma selingenile, kukhona igumbi lokuphumula elibanzi nendawo yasekhishini okuholela ethaleni lokubuka ulwandle. Kukhona negumbi lokugezela kanye nemibhede emibili emikhulu. Izitebhisi zasendlini ziholela phezulu, lapho kunombhede ophindwe kabili kanye neshawa.
Ukuze uqhubeke nenqubo yokungena, inhlanganisela esinikezwe yona izovumela izivakashi ukuthi zivule ibhokisi eliphephile: okhiye bangaphakathi. Izivakashi kufanele zisithumelele amadokhumenti azo kuqala ukuze zinikeze inhlanganisela yebhokisi eliphephile.
Ukuze uqhubeke nenqubo yokungena, inhlanganisela esinikezwe yona izovumela izivakashi ukuthi zivule ibhokisi eliphephile: okhiye bangaphakathi. Izivakashi kufanele zisithumelele am…